Beta 6 yewatchOS 3.2 uye tvOS 10.2 vagadziri | Ndinobva mac
Tiri kumirira kuvhurwa zviri pamutemo kweshanduro dzekupedzisira dzeese OS idzo Apple dzayo, asi kwechinguva uye nezuro shanduro ye beta ye macOS Sierra 10.12.4 neIOS yakasvika, nhasi shanduro dzacho watchOS 6 uye tvOS 3.2 beta 10.2. Mune idzi shanduro nyowani dzakaburitswa masikati ano dzinoita sedzisina shanduko huru kana shanduko kupfuura zvinowanzo gadziriswa bug uye kugadzirisa matambudziko.
Apple irikumhanyisa kuvhurwa zviri pamutemo kweshanduro dzayo dzekupedzisira asi inofanirwa kunge iri yazvino vhezheni dzebeta kana tichifunga kuti tine 6 zvachose Ichokwadi ndechekuti haufanire kushivirira nazvo uye ndizvo shanduro dzazvino hadzishande dzakaipa futi, uye izvo zvinowedzerwa neitsva hazvisi kuti ivo chinhu chatisingashiviriri, asi zvinogara zvakanaka kuti zvigadziriswe.
Asi isu tichaenda kunoona yakanyanya kunaka nhau dzeshanduro idzi dzeApple smart wachi uye yechina chizvarwa Apple TV. Zvatinazvo ndiyo ruzivo rweTheatre Mode yewatch uye yeApple TV iyo tsigiro yeiyo VideoToolbox fomati, iyo inongosvika muUnited States. Kuwedzera kune bug kugadzirisa uye kumwe kugadziridzwa mukugadzika kwesisitimu uye chengetedzo Chero zvazvingaitika, kana paine nhau dzakasarudzika mune ino nyowani beta, isu tichavawedzera isu chaiko kuchinyorwa chino uye zve beta shanduro dzichakurumidza kuwanikwa kune vashandisi vane yeruzhinji vhezheni, saka gara wakarongedzerwa zvekuvandudzwa pamidziyo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » Beta 6 yewatchOS 3.2 uye tvOS 10.2 vagadziri
Kutsvaga Apple-1? Inotevera May 20 ivo okisheni imwe
Dudziro 1.2.1 ndiyo nzira yakanakisa yekududzira webhusaiti muSafari